5-ta Fikir ee Warbaahinta Bulshada ee Khaldan | Martech Zone
5ta Khaldan ee Warbaahinta Bulshada ee Ganacsiga
Dhawaan, waxaa la i wareystay oo la i weydiiyay waxa khaldan ee shirkadaha ay sameeyaan markay horumarinayaan oo ay hirgalinayaan istiraatiijiyadooda warbaahinta bulshada. Khibradeyda ayaa laga yaabaa inay hor istaagto aqallo badan oo halkaas ka jira, laakiin - si daacadnimo ah - waxaan u maleynayaa in warshadani ay ugu dambeyntii bislaatay natiijooyinka naftooda u hadlayaan.
Khaladka Warbaahinta Bulshada # 1: Baraha Bulshadu waa Kanaal Suuqgeyn ah
Shirkaduhu badanaa waxay eegaan warbaahinta bulshada ugu horreyntii a kanaalka suuqgeynta. Warbaahinta bulshada waa a kanaalka isgaarsiinta taas ayaa loo isticmaali karaa suuq geyn - laakiin maahan kaliya kanaalka suuqgeynta. Waxyaabaha ugu horreeya ee shirkadaha ku dhaca markay galaan warbaahinta bulshada caadi ahaan waa cabasho - haddana waxay u baahan yihiin inay si guul leh ku xalliyaan maaddaama adduunku daawanayo. Warbaahinta bulshada waa waxa ay dhagaystayaashu filayaan in kasta oo shirkaddaadu ay u aragto sida kanaalka waa in la isticmaali karo. Inaadan ka jawaabin codsiyadaan waxay baabi'ineysaa istiraatiijiyad kasta oo suuq-geynta suuq-geynta warbaahinta bulshada ah oo aad qorsheysay.
Khaladka Warbaahinta Bulshada # 2: Ku Soo Laabashada Maalgashiga Waa In Si Deg Deg Ah Loogu Cabiro Si Fudud
Shirkaduhu waxay rabaan inay cabiraan waxqabadka oo ay ku soo noqdaan maalgashiga warbaahinta bulshada tweet kasta ama cusbooneysiin kasta. Waxay u egtahay sida loo cabiro guusha koox ka dib markay garaacaan durbaankii ugu horreeyay. Soo celintaada warbaahinta bulshada ee maalgashiga waxaa lagu cabbiri karaa oo keliya kadib markaad runti u keento dhagaystayaal, dhagaystayaashaas (dhagaysiga) waxay noqonayaan bulsho (wadaag), waxaadna dhisaysaa awood iyo kalsooni labadaba warshadahaaga. Si kale haddii loo dhigo, waa inaad sameysaa muusig aad u fiican kahor intaadan filayn soo laabasho! Sidoo kale, soo noqoshada warbaahinta bulshada ayaa sii kordheysa waqti ka dib - dhisida xawaare sidaad u soo jiidaneyso dhagaystayaashaada oo aad u dhiseyso beel bilaabaya inay ku celiso fariintaada. Balooggan ayaa toban jirsaday kaliya 5-tii sano ee ugu dambeysay ayaa dakhligu u kordhay heer laga dhiso meherad ku xeeran.
Khaladka Warbaahinta Bulshada # 3: Suuqgeyntu Waa In Ay Masuul Ka Tahay Baraha Bulshada
Tani waxay la xiriirtaa # 1, laakiin shirkaduhu waxay inta badan ku xaddidaan farriinta warbaahinta bulshada waaxda suuqgeynta, kuwaas oo inta badan aan diyaar u ahayn inay ka jawaabaan. Suuqgeyntu badanaa waxay ku fiicantahay calaamadeynta iyo farriinta - laakiin kama jawaab celin. Adeegga Macaamiisha, Xiriirka Dadweynaha iyo Shaqaalaha Iibinta ayaa ah ilaha ka jira shirkaddaada kuwaas oo soo bandhiga rajo iyo warbaahin maalin kasta, dhagaysta kana jawaab celisa tabashooyinka, oo fahmaa sida loola macaamilo diidmada. Bixinta istiraatiijiyad weyn oo warbaahinta bulshada ah waa inay ku jirtaa shaqaalahan halka suuqgeyntu ka caawineyso farsamada farriinta, kormeerka iyo wadaagista kanaalka, iyo cabirka saameynta.
Khaladka Warbaahinta Bulshada # 4: Mishaps-yada Warbaahinta Bulshadu waa Shirkado Ba'an
Shirkaduhu waxay rumeysan yihiin in farriintooda baraha bulshada ay tahay inay ahaato mid hagaagsan, oo aan khaladaad lahayn. Maalinba maalinta ka dambeysa, usbuucba usbuuc ka dib, iyo bilba bil kadib waxaan aragnaa tusaalooyinkan cajiibka ah ee sida shirkadaha ay u sameeyeen wax dadka aqoonta u leh baraha bulshada ay ugu yeeraan masiibooyinka warbaahinta bulshada. Waxay noqon karaan qaladaad, laakiin marar dhif ah ayay masiibooyin dhacaan. Haddii aad fiiriso dhammaan cilladaha cajiibka ah ee warbaahinta bulshada ee shirkadaha, aqlabiyadda badan ayaa lahaa Saamayn kuma yeelanayo iibka, qiimaha saamiyada, ama faa'iidada. Shirkaduhu gabi ahaanba way sameyn karaan qaladaad waxayna si buuxda uga soo kaban karaan iyaga. Xaqiiqdii, waan aragnay halka ay ka dhawaajinta qaladaadku inta badan kobcisay iibka shirkadda tan iyo markii kanaalada wararka iyo baraha kale ee bulshada ay ku celcelinayaan arrinta wixii dhaafsiisan wixii xayeysiin kasta ay bixin laheyd. Istaraatiijiyaddu waxay ku timaaddaa xallinta khaladka iyo soo kabashada waxay faa'iido weyn u noqon kartaa ganacsiga maaddaama ay dhiseyso kalsooni iyo run ahaanshaha dhagaystayaasha.
Khaladka Warbaahinta Bulshada # 5: Baraha Bulshadu waa Bilaash
Soo helida, daweynta, daabacaadda, ka jawaab celinta iyo kor u qaadida sumaddaada baraha bulshada ma aha lacag la'aan. Xaqiiqdii, haddii aad qabato shaqo xun, waxay u noqon kartaa waqti iyo tamar aad u badan shirkaddaada. Waxay kugu kici kartaa iibin halkii aad dhab ahaan iyaga ka dhigi lahayd. Dhinaca barxadda, kanaallada warbaahinta bulshada sida Facebook, Twitter, iyo Pinterest waxaa si adag u riixaya maalgashadayaashooda si ay u helaan lacag badan… marka awoodda farriintaada ee ah inaad ku dhiirrigeliso baraha bulshada adigoon iibsan dhagaystayaasha qaarkood ayaa hoos u dhacaysa maalin kasta. Aasaasidda miisaaniyadaha iyo ilaha si loo ogaado, loo daaweeyo, loo daabaco loona uga jawaabo baraha bulshada si kor loogu qaado gaadhistaadu waa lama huraan.
Ma raacsanahay ama diidanahay? Maxay yihiin fikradaha kale ee qaldan ee aad rumaysan tahay inay jiraan?
Tags: qalalaasahakhaladaadka ganacsigakhaladaadka warbaahinta bulshada ee ganacsigafreekhaldan la'aantamasiibooyinqaladaadmasuuliyadabaraha bulshada ayaa xumaadaistiraatiijiyadda warbaahinta bulshada
Mawduucyada Suuqgeynta Mawduuca
May 20, 2014 at 9: 32 PM
Shirkado badan ayaa aamminsan in guusha baraha bulshada lagu dhisi karo maalin gudaheed. Suuqyayaashu waa inay si joogto ah u bixiyaan macluumaadka la xiriira oo ay dhisaan sumcadda shirkadooda si ay u abuuraan xiriir waara oo ay la yeeshaan macaamiishooda si ay u arkaan natiijo ka wanaagsan ololahooda warbaahinta bulshada.